Faroole oo Beentii ugu Wayneed Sheegay ee, uu ku Doonayey inuu Ku Weeraro Buuralayda Golis iyo Laasqoray – Codka, shacabka, SSC, wararkii ugu dambeeyey
Faroole oo Beentii ugu Wayneed Sheegay ee, uu ku Doonayey inuu Ku Weeraro Buuralayda Golis iyo Laasqoray
C/raxmaan faroole ayaa sheegaay maalintii taladada aynu soo dhaafnay bbcda ka soo daayey codiisa uu lee yahay buuralayda golis iyo laasqoray ayey ku uruurtay shabaab oo waxaana hogaaminaya fu’aad shangolo..
isagoo doonayaa marmarsiiyo uu ku weeraro meesha dekada ee laasqoray
oo hada dhismo cusub laga bilaabaay iyo dib u habayn wayn
faroole oo hore ugu caanbaxay hagar daamada uu ku hayo dadka ku dhagan hayland.. iyo shacabkooda.
hadaba fu’aad shangolo aya ka hadalayaa ilaacadaha oo sheegay inuusan jogin golis iyo bari toona uu hadaku sugan yahay koonfurta somalia halkaan hoose ka dheego hadalka fu,aad shanglo..
Shiikh Fu’aad Shangole oo beeniyey in uu gaarey deegaanada Galgala ee gobolka Bari.
Sheekh Fu’aad Shingoole ayaa saaka idacada Andulus ka hadley ayaa sheegey in uusan aadin buuraha Golis iyo deegaanka Galgala, isla markaana sheegey in uu ku suganyahay koonfurta Soomaaliya. Fu’aad ayaa saaka ku baraarujiyey dhalinyarada in loo baahanyahay (wuxuu ugu yeerey) cadowga Soomaaliyeed in ay ka saaraan dalka gudihiisa.
Sheekh Fu’aad ayaa sheegey mar wax laga weydiiyey in uu aadey deegaanada buuraha Golis ayaa sheegey in ay arintaasi waxba aysan ka jirin laakiin uu tagi karo haduu doono. Wuxuu yiri “Cadowga Muslinka meel walba ayuu dalka kasoo galay, waxaana muhiim ah in kuwa hada halkan joogo lala dagaalamo” ayuu yiri.
Dhanka kale Sheekh Fu’aad ayaa sheegey in ay qabsadeen magaalada Ceelbuur ayna halkaasi ku dileen saraakiil badan oo ka tirsan ciidamada Itoobiya waa siduu hadalka u dhigay. Dhanka kale Sheekh Maxamed Cabdulaahi oo ka tirsan ayaa sheegey in ay arintaasi tahay mid aanan waxba ka jirin. Sheekh Maxamed ayaa sheegey in ay Alshabaab ay weerar gaadmo ah kusoo qaadey degmada Ceelbuur laakiin ay iska caabiyeen.
Si kastaba ha ahaatee, saxaafada ayaa dhawaanahan waxay qoraysay in ciidamada Alshabaab qaar kamid ah ay soo galeen deegaanada S/land iyo Puntland iyagoo lagaga soo adkaadey gobolada Koonfureed ee Soomaaliya, laakiin sida muuqata waxaa cad in dagaalkii koonfurta Soomaaliya aanan wali lasoo af-jarin.
April 12, 2012 at 3:35 pm -
faroole waaa nin karameeeg wuxuuna madexwayne u yahay puntland anigu majecli shaqsiyan faroole laakin waxaan jeclahay puntland iyo bulshadeeda gaaar ahaaan majeerteen waaa dad midaysan cadowgiina ha jabo guuuul puntland